५०% हकप्रद शेयर जारी गर्न सेबोनमा निवेदन दिएको किसान माइक्रोफाइनान्सको कम्पनी विश्लेषण: | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ५०% हकप्रद शेयर जारी गर्न सेबोनमा निवेदन दिएको किसान माइक्रोफाइनान्सको कम्पनी विश्लेषण:
on: २७ असार २०७५, बुधबार १४:४३ मुख्य खबर, लगानी
५०% हकप्रद शेयर जारी गर्न सेबोनमा निवेदन दिएको किसान माइक्रोफाइनान्सको कम्पनी विश्लेषण:
राष्ट्र बैङ्कबाट ‘घ’ बर्गको इजाजत प्राप्त किसान माइक्रोफाइनान्सले चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा रू. ६३ लाख ३२ हजार नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा ५० प्रतिशतले कमी हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कम्पनीले रू. १ करोड २९ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको ब्याज खर्च र अन्य खर्चहरु बढेकाले नाफामा कमी आएको हो । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको चुक्तापूँजी २४ प्रतिशतले बढेर रू. ४ करोड पुगेको छ भने कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. ४ करोड ८ लाख छुट्याएको छ । साथै कम्पनीले २ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गर्नको लागि असार १४ गते सेबोनमा निवेदन दिएको छ । कम्पनीले २ लाख ४० हजार २ सय ५० कित्ता हकप्रद शेयर जारी गर्नको लागि निवेदन दिएको हो । विक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ ।
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. १६१०
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. ४७२९
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. ३१५
१८० दिनको भारित औसत मूल्य: रू. १५५५.४१
अध्यक्षः नेत्र प्रसाद जोशी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतः इन्द्र कुमार शाह
प्रधान कार्यालयः लम्कीचुहा ७, कैलाली
स्टक स्टिकरः केएमएफएल
कम्पनीका महत्वपूर्ण वित्तीय परिसूचकहरू (रू. हजारमा )
कम्पनीको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७३/७४ बीच तुलना गर्दा :
चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. २३ करोड ३६ लाख निक्षेप सङ्कलन गरेर रू. ९७ करोड २ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ । सोही अवधिमा कम्पनीको लगानी रू. १० लाख रहेको छ ।
खुद ब्याज आम्दानी रू. ३ करोड ६४ लाख, कर्मचारी खर्च रू. ३ करोड ४३ लाख, अन्य सञ्चालन खर्च रू. २ करोड ५२ लाख र सञ्चालन नाफा रू. ७८ लाख १२ हजार रहेको छ । कम्पनीको स्थिर सम्पत्ति ९७ प्रतिशतले बढेर रू. ३ करोड ३० लाख र अन्य सम्पत्ति १५ प्रतिशतले बढेर रू. २ करोड २५ लाख पुगेको छ ।
चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. २१ लाख ३७ हजार खराब कर्जा उठाउन कम्पनी व्यवस्थापन सफल भएको छ । कम्पनीले सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा रू. ६० लाख २४ हजार छुट्याएको छ ।
कम्पनीको सिडी रेसियो ९० दशमलव ०६ प्रतिशत, पूँजी कोष लागत १० दशमलव ५८ प्रतिशत र पूँजी कोष पर्याप्तता ८ दशमलव २२ प्रतिशत रहेको छ । यस कम्पनीको कार्यक्षेत्र १५ जिल्लामा रहेको छ ।
कम्पनीको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार तरलता अनुपात ३१ दशमलव ०३ प्रतिशत, प्रति शेयर नेटवर्थ रू. २ सय २ दशमलव १७ र मूल्य आम्दानी अनुपात १ सय १४ दशमलव ९७ रहेको छ । मङ्गलावरको शेयर मूल्य नेटवर्थको ८ गुणा बढी छ ।
कम्पनीको अर्निङ पावर रेसियोः
अर्निङ यिल्ड रेसियोः
प्रतिशेयर आम्दानी/प्रतिशेयर बजार मूल्य×१००
कम्पनीको यी अनुपात जति बढी भयो कम्पनीले त्यति राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने क्षमता रहेछ भन्ने बुभिन्छ ।
खरीद चापः कम्पनीको मङ्गलवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समय सम्ममा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप करीब २ गुणा बढी छ । सो अवधिसम्म १ सय ६५ कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग र ९० कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग रहेको थियो ।
मङ्गलवार भएको शेयर कारोबार विवरण:
१० अप्रिल २०१८ १० जुलाई २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः कम्पनीको ५९ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा कालो मारोबोजु आकृती बनेको छ । यस्तो आकृतीले शेयर मूल्य घट्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआईः कम्पनीको ५९ दिनको कारोबारमा आरएसआइ न्यूट्रल जोन (४८ दशमलव ७६ स्केल) मा छ । यसले शेयर खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीको ५९ दिनको कारोबारमा स्ट्याण्डर्ड डेभिएशन ४३ दशमलव ५५ विन्दुमा छ । उतारचढाव सामान्य रहेको छ ।
मुभिङ एभरेजः कम्पनीको ५९ दिनको कारोबारमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकआपसमा टाढिएका छन् । हालको मूल्य यी दुई रेखाभन्दा तल छ । मङ्गलवारको शेयर मूल्य रू. १ हजार ६ सय १० देखि बजारको अवस्था परीवर्तन भई मूल्य महङ्गिएमा रू. १ हजार ७ सय ५ मा प्रतिरोध र सस्तिएमा रू. १ हजार ५ सय ११ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।